घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू नेमार बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
हाम्रो नेमार जीवनी तथ्या्कले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्यहरू, पत्नी, बच्चाहरू, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैलीको पूर्ण कभरेज प्रस्तुत गर्दछ। सत्य यो हो, हामी तपाईंलाई उनको जीवन कहानी को पूर्ण विश्लेषण प्रदान गर्दछौं, नेमारको शुरुआती दिनहरूदेखि जब उहाँ सफल हुनुभयो।
हो, सबैले उनको आँखा-चल्ने कौशल र Ballon d'Or को लागि नामांकनहरूको श्रृंखला बारे जान्दछ। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू नैमर जूनियरको बायोको बारेमा धेरै चिन्ता छन् जुन धेरै रोचक छ। अब अगाडी बढो बिना, सुरु गरौं।
नेमार बाल्यकाल कहानी:
नेमार दा सिल्वा सैंटोस ज्यूनिरी को5मा जन्मिएको थियोth फरवरी को 1992 मा Mogi दा Cruzes, साओ पाओलो, ब्राजील। उहाँ आफ्नो बुबा, नेमार सांतास श्री (एक फ्याट फुटबलर) र उनको आमा, नदिन सैंटोसमा जन्मनुभएको थियो।
चार महिनाको निविदा उमेरमा, नेमारले चमत्कारपूर्ण ढंगले घातक कार दुर्घटनालाई बचाउनुभयो। घातक कार क्र्यास दुर्घटनाको कारण भएको थियो जसले गर्दा बेस्सन्देही एक खैरो पर्वत आफ्नो परिवारको कारमा भाग्यो किनकी उनि केही रिश्तेदारहरु लाई भेट्न को लागी थिए।
सौभाग्य देखि, बेबी नेमर को गाडी को फिर्ता सीट मा तैनात बच्चा सीट मा राखयो थियो र दुर्घटना देखि बचाइयो।
नेमार - बढ्दो बर्ष:
जब आज फुटबल प्रतिभाशाली लाग्छ, यो विश्वास गर्न गाह्रो हुने छ कि त्यो कहिल्यै गुलाबी बचपन थिएन। वास्तवमा, तिनको परिवारले उनको जन्मको समयमा गहिरो गहिरो बनाइदियो। तिनको बुबा, नेमार श्रीले आफ्नो परिवारलाई निरन्तरता दिनको लागि धेरै काम गर्न थालेको थियो। तथापि, उनी नेमारको पहिलो जन्मदिन मनाउन सक्षम थिए।
नतीजा, जब नेमार एक विद्यालय उमेर (तल चित्रित) को थियो, उनी एक स्कूल मा भर्ती भएको थियो जसले आफ्नो ilk सूट। विद्यालय पछि घर फर्किएपछि तिनको परिवारले विद्युतीय बिजुली नभएको कारण उनीहरूले यसलाई बर्दाश्त गर्न सकेनन्, एक विकास जसले नेमार र तिनका साना बहिनीलाई अध्ययनको लागि रोशनीको एक मात्र स्रोतको रूपमा मोमबत्तीहरूसँग राखे।
जबकि नेमार श्री आफ्नो परिवार को स्थायित्व को लागि संघर्ष गरे, उनको छोरा नायमर जून को खोज र फुटबल मा आफ्नो प्रतिभा को विकास शुरू गरे। फ्याटब्याक धन कमाएको अन्य झण्डाहरू जस्तै, नेमार क्यारियर फुटबलमा बास्केटबाल कोर्टबाट हटाइयो र खेलको मैदान होइन।
उनले खेल्न सिके Futsal र इनडोर खेलमा उत्तम आफुलाई उत्तम बनाइएको छ जुन एक फुटबल खेलाडीले लुटिएको छ जसले धेरै उकालो गर्दैन। बास्केटबाल अदालतमा खेलिएको खेलबाट बेजोड र सीमाको कारण, नेमारले फुटबल क्षेत्रमा खेल्ने प्रभावशाली कलाहरू सिक्न र विकास गर्न सक्षम थिए।
कुनै समय, उहाँ सडकमा साथीहरूको बीचमा लोकप्रिय हुनुभयो जसले तिनलाई आफ्नो कौशल लिनुभयो। नेमार श्री। कौशल को आफ्नो छोरा को स्वीकार गरे र कभी-कभी पेशेवरता को बाटो मा जवान नेमार को चलने को लागि आफ्नो व्यस्त कार्यक्रम को समय ले लिया।
नेमारको अभिभावकको बारेमा:
धेरैको लागि आनुवंशिकी नेमार जूनियर आमाबाबुले एक छोराको सुपर बच्चाको लागि एकदम सही फिट हुन्छ। तिनीहरू दुई असल जैविक नमूना थिए जसले एक दुर्लभ फुटबल जीनस उत्पादन गरेका छन्।
नेमारले सामान्यतया उनीहरूको फुट्टल र स्ट्रीट पिक अप खेलबाट डबल चुम्बन प्राप्त गर्छन्। स्नेह अविश्वसनीय थियो र कुनै सीमा थिएन, नेरमर उनको सनटोस मा सान्टोस भएको थियो (जसलाई तल चित्रण गरिएको छ)।
यस्तो चुम्बन पछि, तिनका आमाबाबुले उनलाई यसो भन्थे;
... ''हुन सक्छ, भाग्य र भाग्यले हामी भन्दा राम्रो आमाबाबुलाई दिएको हुन सक्छ। तर हामिले तपाईंलाई भन्दा राम्रो छोरा पुर्याउन सकेन। हामी तपाईंलाई पुत्रलाई माया गर्छौं, तपाईं सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अहिले। जानुहोस् र सबैलाई परिष्कृत गर्नुहोस्! "...
नेमार जीवनी - सान्तोस हेड कोचको बोरामा भूमिका:
नार्मार अझै पनि सान्टोसमा भएको थियो, उनले एक घटनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए जसले क्लबको प्रशिक्षक डोरिवल जुनियरको बिरोध गरे। यो घटना सुरु भयो जब डोरावल जुनियर नेमारलाई सजाय लात लिने क्रममा रोकियो। लात मारिसल नामक अर्को खेलाडीलाई नियुक्त गरिएको थियो, एक विकास जसले नीमार उग्र बनायो। जब उनले बेंचमा फर्केर आए, उनले कोचको निर्णयलाई पक्का गरे कि उनलाई अपरिहार्य लाइनम्यानले रोक्न थियो।
नेमारले आफ्नो अनौपचारिक व्यवहारको लागि माफी माग्यो तर टाउको कोचले क्लबको स्क्वाड छोडेर कोरिन्थीहरूको विरुद्धको क्लासिकियो गणितको लागि छोड्न सकेन।
क्लबको निर्देशक जसले नेमारलाई जन्म दिएका थिए डोरोभा जूनियर निर्णयसँग आनन्दित थिएन र उनीहरूलाई बोक्ने निर्णय गरे। डोरोवलको बर्खास्तले साबित गर्यो कि नेमार मात्र क्लबको महत्त्वपूर्ण खेलाडी थिएन तर चुनेको छ जसले ब्राजील फुटबललाई बचाउनेछ।
"दिसिस" नेयरको4आजीवन मित्रहरू छन् जुन उनको फुटबल क्यारियरलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू आफ्नो सेलिब्रिटी मित्रका लागि आधारभूत प्रकार्यहरू सहित प्रशोधन जर्सी अनुरोधहरू र पिचमा ध्यान दिएर नेमार छोडेर स्वतन्त्रताहरू राख्छन्।
उपनाम पछिको कारण:
बिरका ड्रेसिंग रूममा उनीहरूको टोलीले 'द देर नाइट' नामकरण गरेकी थिइन् किनभने उनीसँग जीवनको आनन्द उठाउने प्रवृत्ति छ, खासगरी जब यो "द दिसिस" सँगै रात बिताउँदछ।
ब्राजीलियन स्टारले उपनामलाई प्रेम गर्दछ जुन बेटमैनको लागि एक शीर्षक हो। उहाँले यसलाई 2015 को 'हेलोवीन' पार्टीमा खेल्नुभयो जब उनले ड्रेकुलाका फ्याक्सको साथ एक बैटमैन मुखौटा लुगा लगाए।
जबकि अरूले उनीहरूका गर्भधारणहरूलाई पार्टीहरूमा लिन्छन्, नेमारले विपरीत गर्छ। उसले आफ्नो माई लिन्छ। उसको अनुसार,
"आमा परिवार चलाउँछन्। त्यो दयालु व्यक्ति हो, यसको बिना, हामी गुमाउनेछौं। उनले हामीलाई समर्थन गर्छन्। मैले मेरो आमाको नजिक साँच्चै भेट्दा मेरा बहिनीहरू कलेजमा थिए र पिताजी धेरै यात्रा गरिरहेका थिए। "
नेमारको श्रीमतीको बारेमा:
19 को जवान उमेर मा, नेमारले आफ्नो बचपन केटी केरोलिना डान्टास संग एक सम्बन्ध थियो जसले गर्भवती पाए।
उनले एक छोरा जन्माइन् जसमा उनले 'डेवि लुका' नाम गरे। नेमार उनको गर्भावस्था मार्फत सबैको साथमा उभिन र पछि उनको साथ रह्यो। धेरैजसो डेभि लुकाको जन्मले उनीहरूको सम्बन्धलाई पुष्टि गरे तापनि केवल केहि थाहा पाएको छ कि नेमारले सधैं मायालु र मायालु हृदय पाएको थियो।
नेमारको छोराको बारेमा:
ब्राजिलका फुटबलर आफ्नो छोरालाई उनको जन्म पछि मन पराउँछन्। उसको नजिकको एक महत्त्वपूर्ण भाग एक बुबा र छोरा बाथटब खेल संलग्न गर्दछ।
3 को उमेर मा, डेविस लुका पहिले देखि नै उनको पिता को फुटबल शिष्टाचार को शूटिंग को लागि प्रयोग गरेको थियो जो उनको सिकाउछन्। नेमार ले डेभिवी लुकालाई एक कदम अगाडी बढाए र उनको एनएनएनएक्सएक्स मा बार्सिलोना फुटबल स्कूल एफसीबी एस्कोला मा नामांकन गरे,
मोहाक शैली बर्ष:
नमार को रिपोर्ट मा पहिलो ब्राजील खेलाडी मोहोकको कपाल काटने वाला शैली हो।
नेमार मोहलाल शैली। पुरुषहरूको केश टेलिभिजनको लागि क्रेडिट
हाल, ब्राजिलमा लगभग हरेक युवा फुटबल प्रशंसकले आफ्नो कपालको प्रतिलिपि बनाउने कपाल-कपाल शैली बनाउँछ। साथै, उहाँ पहिलो र मात्र ब्राजीली फुटबलर हुनुहुन्छ जो सर्वशक्तिमान समय म्यागजिनको सामनेमा राखिएको छ।
ब्राजिलहरू नेमारमा अत्यन्तै निराश थिए किनकि तिनीहरूले 'एक सस्तो कदम एफसी बार्सिलोना '. उनको लोकप्रियता, प्रसिद्धि र बकाया स्थानीय हाइपेजको आधारमा, नेमार र तिनको क्लबले मात्र 57 मिलियन यूरोको लागि सहमति व्यक्त गरेको छ जुन उनीहरूलाई एफसी बार्सिलोना। यो धेरै को लागी एक निराशाजनक अन्त्यको रूपमा देखा पर्यो।
नेमारको धर्मले वर्णन गर्यो:
साँचो ईसाई र येशू ख्रीष्टको १००%:
बाल्यकालदेखि नै नेमार येशू ख्रीष्टको विश्वास गर्छन्। ब्यानर (१००% येशू) प्रयोग गर्ने धेरै मनपर्‍यो।
मूलतया, नेमार विश्वासद्वारा एक साँचो र व्यावहारिक ईसाई हो। उहाँले जीवनलाई कुनै चीजको रूपमा हेर्नुहुन्छ जुन कुनै व्यक्तिको लागि अर्थ बनाउनेछ जब उनले येशूलाई सबै कुराको बीचमा राख्छ। दुवै गब्रिएल यीशु र एडिंसन काभनी त्यसैगरी येशू प्रेम प्रेम जीवन जस्तै नै नेमार
नेमार जीवनी- फेम टू फेम स्टोरी:
नेममर 11 को उमेर भन्दा पहिले ब्राजिल, साओ पालोको सर्वश्रेष्ठ स्ट्याटिक फुटबलहरूमा एक हुनुभयो। उनको निर्दोष र प्राकृतिक ब्राजील साम्बा प्लेलिस्टले उनलाई स्ट्रीट फुटबल आयोजकहरूले मनपर्ने छनौट गरे जसले उनलाई महत्त्वपूर्ण सडक खेलको लागि सुविधा प्रदान गर्यो।
त्यो गति, डेभबलिङ कौशल र उत्कृष्ट दूरी को लक्ष्यहरु मा गेंदहरु घुमाउन को लागि कमजोर बायाँ खुट्टा को अविश्वसनीय दृष्टिले समुद्र तट र कडा सतह फुटबल फुटबलमा उत्कृष्ट पहिचान पाएको छ। यसले नेमारलाई फुटबल फुटबलबाट पिचमा फुटबल खेलिरहेको छ।
नेमारलाई पछि हेर्नु भएको थियो र पश्चिम हेमबाट स्काउट्सले खोजी गरेपछि रियल म्याड्रिडले अन्य क्लबहरूमा अन्यथा खेलिरहेका छन जुन उनीहरूको क्लब क्लब सोसोस खेल्न थालेको थियो। 2011 मा, उनी ब्राजील राष्ट्रिय टोलीमा एक स्थान को स्थान तोकिएको थियो कोच, लुइज फेलिप।
उसले अन्ततः बार्सिलोना एफसीले 27 मा साइन इन गर्योth 2013 मिलियन डलरको लागि 57 मा चार वर्ष पछि, तिनले PSG द्वारा रेकर्ड ट्रांसफर शुल्कको लागि साइन इन गरे $ 263 मिलियन। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
हाम्रो नेयमार जूनियर बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
latif मे १,, २०१ 25 बिहान :2019:१:10 बिहान
नायिका जेआर डट कम से रुकुम रियल मैड्रिड मा 2019 र दैनिक दर्शकहरु को बिरुद्ध डी या एट ला कोप जेम्स एम्स ट्रेस बिएन एनइमर र बेटा फिल्स र जीप वेक्स डेनरियर ले पतली नीरियर जेआर